Alanya အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး07 AntalyaAlanya အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်
03 / 01 / 2020 07 Antalya, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ
Alanya ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက် - Antalya Metropolitan Municipality သည် Kargicak-Mahmutlar-Alanya လိုင်းပေါ်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုနိုင်ငံသားများနှစ်ပေါင်းများစွာဖြေရှင်းရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသောဖြေရှင်းချက်ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကား ၂၆ စီးအား Alanya ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘတ်စ်ကားများနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တနင်္လာနေ့မှ Kargicak နှင့် Mahmutlar အကြားအပြန်အလှန်ပျံသန်းမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မတ Muhittin ပိုးမွှား, လျှောက်လွှာ Alanya များအတွက်ဥပမာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူကပြောသည်။
Antanyaya Metropolitan Municipality Muhittin Böcek၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Alanya သည်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြေရှင်းရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ Antalya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနနှင့်ရထားလမ်းစနစ်များ Nurettin Tonguçအသေးစားဘတ်စ်ကားများဥက္ကPresident္ဌ Alanya Dogan Bacak၊ Alanya ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားသမဝါယမ၊ Mahmutlar နှင့် Kargicak ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားသမဝါယမအသင်းများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Kargıcakနှင့် Mahmutlar တွင်အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကား ၂၆ စီးသည် Alanya ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘတ်စ်ကားများ၌ပါ ၀ င်သူများ၏သဘောတူညီချက်နှင့် UKOME ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။
အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားသည်Kargıcakနှင့် Mahmutlar မှ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မှတနင်္လာနေ့မှ Alanya အနောက်ဘက်ထွက်ရှိ Dinek Neighborhood သို့သွားမည်။ ထိုနည်းတူစွာ Alanya Public Bus သည် Kargicak သို့ခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပေါင်းစည်းခြင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဒေသဆိုင်ရာသမဝါယမအသင်းများသည် Alanya ပုဂ္ဂလိကအများပိုင်ဘတ်စ်ကားသမဝါယမအသင်း၏လက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးရေကူးကန်စနစ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ Kargıcakနှင့် Mahmutlar မှနိုင်ငံသားတစ် ဦး သည် Alanya အနောက်ဘက်ရှိတစ်နေရာရာသို့ဘတ်စ်ကားနှစ်စီးစီးခဲ့ရသည်။ စနစ်သစ်ဖြင့်ပြည်သူလူထုသည်ဘတ်စ်ကားတစ်စီးတည်းဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသွားရန်အခွင့်အရေးရရှိလိမ့်မည်။
"Alanya ဟာစံပြလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟု Antalya Metropolitan Municipality မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Muhittin Böcekကပြtheနာကိုအများသဘောတူဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်သည်နိုင်ငံသားများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်သွယ်မှုနှစ်ရပ်လုံးအတွက်ကျေနပ်အားရလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်Böcekကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အရေးအကြီးဆုံးသောပြoneနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ik: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အားထုတ်မှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးခဲ့သည်။ Alanya တွင်ချမှတ်ခဲ့သောဆုံးဖြတ်ချက်သည်အရေးအကြီးဆုံးအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ “ ကျွန်တော်တို့ကာလမှာသယ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်” ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Antalya Metropolitan Municipality မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရထားလမ်းဌာနအကြီးအကဲ Nurettin Tonguçက Alanya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်သွယ်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများသည်အပြုသဘောဆောင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဒီအလုပ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Validator ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏မော်တော်ယာဉ်များတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်ပတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်သည်။ လိုင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါတယ် ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်နားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Alanya ပြည်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
Alanya ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ropeway စီမံကိန်းကိုမနက်ဖြန်
Alanya ဆုံးဖြတ်ချက်မနက်ဖြန်အတွက် ropeway စီမံကိန်းကို။
İzmir Metro သတင်းပျော်မွေ့!
မြေအောက်ရထားအတွင်းတိုးတက်မှုများကကြိုဆို: 2020 အတွက်ဖွင့်လှစ်!
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ Alanya Air ကိုထိန်းချုပ်ရေး
TCDD လမ်းစနစ်ယန္တရားစီမံကိန်း KIK သည် Bayraktar Makine ၏ကန့်ကွက်မှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
မီးဆုံးဖြတ်ချက်၏အမှု၌ Haydarpasa ဘူတာရုံ
Alanya Minibus အခန်း
Kargıcak Mahmutlar Alanya လမ်းကြောင်း